ကျော်စိုးမိုး (နည်းပညာ): Beini Minidwep-gtk ဖြင့် Wifi Password ရယူနည်း အဆင့်ဆင့် ကျော်စိုးမိုး (နည်းပညာ)
Beini Minidwep-gtk ဖြင့် Wifi Password ရယူနည်း အဆင့်ဆင့် ဒီတစ်ခါကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေတဲ့(ခိုးသုံးနေတဲ့) ဟဲ ဟဲ..wifipasswordခိုးနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
CD ဖြစ်မြောက်ပြီဆိုလျှင် password ကိုရယူဖို့ အတွက် ၄င်း CD ဖြင့်စက်အား
Boot လုပ်၍ ရယူရမည် ဖြစ်သောကြောင့် စက်အား Restart လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Boot လုပ်တယ်ဆိုတာ သာမာန်အားဖြင့် စက်အား CD မှတဆင့် windows တင်ရန် Format လုပ်သလိုပါပဲ။ စက်ကို စစဖွင့်ဖွင့်ချင်း Esc, F2, F10 စသဖြင့် မိမိစက်အပေါ်မူတည်၍ နှိပ်ပေးရပါမယ်။ တချို့ စက်တွေကျတော့ ဘာမှနှိပ်စရာမလိုပဲ
စက်ထဲ Boot CD ရှိသည်ဆိုလျှင်နှင့် စက်စစဖွင့်ချင်း auto boot လုပ်ပေးပါတယ်။ Boot မလုပ်ခင် မိမိစက်၏ CD Rom ကို Boot လုပ်ပေးနိုင်အောင် Bio Setup လုပ်ထားရပါအုန်းမယ်။ ထို့ အတွက် စက်စစဖွင့်ချင်း F12 ကိုနှိပ်၍ System Setup ထဲဝင်ပါ။ Boot Order မှာ Boot From CD Room ကို Enter Key နှိပ်ပြီး အပေါ်ဆုံးမှာ ထားပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Exit ( F10 ) ကိုနှိပ်၍ Save လုပ်ကာ ထွက်လိုက်လျှင် Setup ပြီးဆုံးပါပြီ။
( ၅ ) ထိုအခါ password hacking အလုပ်လုပ်နေသည်ကို အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မည်။ မျှားပြထားသည့်နေရာသည် IVS ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းများ တက်နေသည်ကို တွေ့ ရပါမယ်။ ဂဏန်းအရေအတွက် ၃၀၀၀၀ ကျော်အထိ စောင့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ၃၀၀၀၀ နဲ့၅၀၀၀၀ ကြားမှာ password ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ password တစ်ခုကို ၁၅မိနစ်မှ မိနစ် ၂၀ခန့်hack ရပါတယ်။
သတိပြုရန်မှာ hack နေချိန်အတွင်း keyboard မှ space bar ကို မနှိပ်မိစေရန်ပါပဲ။ space bar တစ်ခါနှိပ်လျှင် hack ခြင်းအား ရပ်နေစေပြီး space bar ထပ်မံ နှိပ်ပေးပါက hack ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။ IVS က ကိန်းဂဏန်းပြောင်းလဲရာမှာ ၅ မိနစ်အတွင်း ရပ်တန့် နေတယ်၊ ပြောင်းလဲမှု နှေးကွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ထိုလိုင်းအတွက် hacking လုပ်ခြင်းကို ရပ်နားပေးလိုက်ပြီး နောက်တစ်ချိန်မှ ထပ် hack ဖို့ မှတ်သားထားပြီး တခြား wifi လိုင်းကို အရင် hack စေချင်ပါတယ်။
minidwep-gtk ဖြင့် hack ရတာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလဲ နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လက်တွေ့ ပိုင်း ပိုအားသန်လို့စာနဲ့ ရေးရှင်းပြတဲ့အခါ ဖတ်ရှုရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့လျှင် နားလည်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ လောလောဆည် WEP ကိုပဲ hack နိုင်သေးပြီး WPA2-PSK ကိုတော့ လက်လျော့ထားပါတယ်။
AutoCAD Elevation တစ်ခုအားအရောင်ဖြည့်သွင်းခြင်း
Photo Mosaic လုပ်ကြမယ်
Samsung Galaxy အမျိုးစားများအား Root & UnRoot ပြုလ...
Opera Browser နောက်ဆုံးထွက်လေးပါ
Hacking ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်
Mozila Firefox နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါ
Folder လေးတွေကို အရောင်လေးတွေနဲ့ထားကျမယ်
copy ကူးတဲ့ နေရာမှာ ဒုံပျံလိုမြန်တဲ့ဆော့ဝဲ
ဖုန်းဘက်ထရီကို နေရောင်ခြည်နဲ့ အားသွင်းမယ်
Android phone များအတွက် Yangon+Mandalay လမ်းညွန်
ခေါင်းပန်း လှန်တဲ့ဂိမ်း(Andirod Apk)
mobile မှတဆင့်ဖုန်းနံပါတ် မပေါ်အောင်ခေါ်နည်း
ငှက်ပျံနေတဲ့ ပုံ လုပ်မယ်
MyanBrowser (မြန်မာ browser အသစ် လေး ပါ)
Facebook အကောင့် ဖွင့်မရ ပြဿနာတက်ခဲ့သာ် ဖြေရှင်းရန...
Gmail Hack Software ကလေးပါ။
လာပြီ ဘလော့ကာတွေအတွက် ချက်ခန်း (နိုင်ဆိုဒ်တွေနဲ့ဆင...
Christmas season မှာ မိမိဘလော့မှာ အလှဆင်ဖို့ X’mas...
ဘလော့ညာဘက်ဘေးမှာChatBox သို့မဟုတ်အခြား Menu ထားချင...
Title Bar Running Code
ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ဖွင့်တာနဲ့ ကိုယ်ပျောက် သီချင်းသံလေး...
ဘလော့လင့်တွေကို မောက်တင်လိုက်ရင် လင့်လေးတွေ ပြေးနေ...
Blog မှာ ခေါင်းလောင်းသံ တိုးတိုးလေးကြားချင်ရင်..
Blog မှာ CCTV ကင်မရာလေး တပ်မလား
100 အထက်ရှိတဲ့ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုဖိုင်ဆိုက် upload...
Computer Memory ကို Clear လုပ်နည်း
Gmail Account Lock ကျဖြည်နည်း
စုဆောင်းထားသော မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်များ ( အသုံးဝင်မှာပါ...
Sliding Side Menu တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
Marquee Blur Effect ပြုလုပ်နည်း
အဆင်သင့်သုံး အစားထိုးစရာ photoshop psd ဖိုင်များ(A...
Upload Speed ကိုမြှင့်ပေးမယ့် Uploading Upload Too...
Blog မှာ jQuery Pop-up For Facebook Like Box With ...
Blog က ပို့စ်တွေကို Facebook သို့ Automatic ရောက်ေ...
Desktop ပေါ်မှာ Slide Show လုပ်မယ်
Microsoft office-ဖိုင်မှ PDF-ဖိုင်သို့ / PDF-ဖိုင်...
နောက်ခံပြောင်းတဲ့ဆော့ဝဲ(Picture Cutout Guide)
စင်္ကာပူ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို (၁၀)မိနစ်ထိ ဖုန်းအလက...
laptop မှာ screen မရိုက်တတ်သူများအတွက်ပါ
web စာမျက်နှာကိုအသံထွက်ဖတ်ပြမယ့်Tool ဆော့ဝဲ
Photoshop Cs5 Portable ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
Remember Password ခိုးကြည့်မယ်.
Tango Software နဲ့ ဖုန်းအလကားပြောမယ်...
သင့် websites အတွက် ကောင်းနိုးရာရာ ကုတ်လေးများ.......
Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းများ background ပြောင်းမယ်
ကြုံဖူး ကြလားမသိဘူး..ဂျီတော့ ချက်ဘောက်မှာ မြန်မာဖေ...
Post ရဲ့ အောက်က (you might also like) ပုံလေးတွေ ထည...
Windows 8 မှာ Partition တစ်ခု ဖန်တီးနည်း
Label တွေရဲ့ အရှေ့မှာ ပုံတွေ ထည့်နည်း
ဘလော့ဆိုဒ်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ဒေါင်းတာလေးထည့် မယ်
Blog ဆိုဒ်တွင် နောက်ခံ သီချင်းထည့်နည်း
ရေးချင်တာရေးပြီး မှတ်ထားလို.ရတဲ့ diary လေးပါ။
gtalk style သစ်
internet online TV လေးပါ။
folder များကို မိမိစိတ်ကြိုက်အရောင် ပြောင်းချင်သူမ...
ကွန်ပျူတာ Desktop ပေါ်မှာ နာရီ တင်ထားဖိုပအတွက်